Ixabiso lempahla eluhlaza liyanda kwaye liza kuqhubeka
Kutshanje, ukukhanya kweFujian Wood Linsen ukukhanyisa, eMpuma ukuya eHongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics nakwamanye amashishini amaninzi e-PCB akhupha amaxabiso ebhodi yePCB, phantse lonke ukwanda nge-10%.
Ekuqaleni kukaJulayi, iShandong Jinbao, iKingboard, iMingkang, ilizwe laseWeili, uJin Anguo kunye nezinye iinkampani ziye zakhupha ubhedu, i-CCL kunye nezinye izaziso zokunyusa amaxabiso, ukonyuka kwamaxabiso ngefoyile yobhedu ngetoni nganye ye-1000-2000 RMB, ibhodi emgceni inyusa i-10RMB ii-pcs, i-glass ccl yokugquma iphakamise i-5RMB / iiPC, iphepha lesinyithi eliphakanyisiwe i-5RMB / iiPC.
Kwisaziso sexabiso, ipleyiti, abasebenzi, imichiza kunye nezinye iindleko ziye zaba zizinto ezintathu zoku kunyuka kwamaxabiso. Ngapha koko, ukonyuka kwamaxabiso yinto ebalulekileyo kubudlelwane phakathi konikezelo kunye notshintsho lweemfuno. Ukuthandwa kweemveliso ze-elektroniki kunye nokuphuculwa kweemfuno zentengiso yesiphelo kuye kwanda, ukuhla kwe-pitch encinci ye-market boom ye-boom iyaqhubeka inyuka, iqhutywa yimfuno zebhodi ye-PCB eyahlukeneyo.
Ezinye izincedisi zomboniso we-LED, njengebhodi ye-PCB, iikhabhathi, njl., Inkqubo yemveliso iya kubangela ungcoliseko olukhulu kakhulu, ayihlangabezani neemfuno zesizwe zokusingqongileyo, kuye kwafuneka ukuba ilungiswe kunye nokuphuculwa kwemizi-mveliso, ethe ngqo yaphucula iindleko zezi zincedisi.
Amaxabiso emveliso eluhlaza ngumoya ongena ebusuku, kwasekuqaleni konyaka ophelileyo, ezinye izinto zoncedo zaqala ukunyusa amaxabiso. Ngelixa urhulumente ebekwicala lokubonelela ngohlaziyo, uzibophelele ekuphuculeni umgangatho wenzuzo yamashishini oshishino. Oku kuthetha ukuba amaxabiso azakuqhubeka. Kwisiphelo, ezi ziindaba ezimbi.
Ixabiso linokuba nomqhubi we-IC. Ngokomthombo wamashishini, i-Epistar yangoku ekuboneleleni ngoxinzelelo. I-pitch encinci iyachuma, ibango elinamandla lemarike aliziswanga kuphela kwi-odolo kunye neenzuzo, kukho umsinga ozinzileyo woxinzelelo lwempahla eluhlaza.
Abangaphakathi baqikelela ukuba imeko yokubonelela kunye neemfuno ziya kuqhubeka kude kube ngunyaka ozayo, oko kuthetha ukuba ixesha elincinci lamaxabiso okanye liya kuqhubeka.
Ixesha lokuposa: Mar-26-2021